April 2020 - Vanoda Zvinhu
kusvira mvana nemwana wayo Ndakati ndiri kubasa ndokutaura nemumwe musikana kuti ndainge ndabaiwa nehosha.Grace ndokubva ati aah panext door pangu pane umwe mumvana kana uchida zvema one night stand.Akandipa nhamba dzemumvana uya.Ndichisvika kumba ndakashandisa landline kufona ndichizvijurujusa.Babe rakati noproblem svika hako wakasununguka.Ndakarova quick bath ndokuposhera kaperfume kaYou are…
Mboro mubeche raLandlord webabie rangu iro riri munext room! Kubvira ndakadanana ne chimoko changu Tambudzai handina kuzombosvira chimwe chimoko.Tambudzai aive ne beche raitapira se huchi hwezvi nyunyu.Ndakange ndamubvisa hu mhandara achiri form 6.Taidanana nemwana uyu.Moyo wangu wainge wakaperera murudo. Baba va Tambu vainge vakashaika saka aigara namai vake…
Masviriro andakaita girlfriend yaChris kuseri kwemba! Ndinoziva hazvisi right kukwira musikana wefriend yako asi it had to happen. We were just destined kusvirana chete, zvimwe zvacho zvakangonyorwa. Ndainge ndisina kana interest naye until pandakanzwa through imwe shamwari yake kuti ai complainer kuti boyfriend yake Chris arikutadza kumutundisa plus…
Posted on Apr 05 Apr 06
Ndakatsemurwa nayo Nyoro pa Carpet na Bamukuru murume watete
Ndakatsemurwa nayo Nyoro pa Carpet na Bamukuru murume watete Pandaikura ndaingovafarira semurume watete. Mari ndaipiwa kudarika vamwe vese ko murume weduka. I kept myself ndiri kavirgin not for him but my mother advised us of only kusvirwa after marriage. Ndakapedza a teaching course ndakawana basa at a remote…
Kukwesha mainini Pauline Kusango Nyoro!
Kukwesha mainini Pauline Kusango Nyoro! Mkoma wangu paakaroora I was in form 3 and mainini Pauline munin’ina wamaiguru was also in form three but kuchikoro kwavo kwaiva kure nekumba .So mkoma na maiguru vakawirirana kut mainini vauye kumba kunechikoro chaiva padhuze. So namainini Pauline taiva same age tichiita…
Kukwira kahot thang from Norton Nyoro tasangana paLondoners muHarare. So one weekend I was bored zvangu, yanga iri Sartuday and my boy came over to visit, the previous night I had gone out with some chicks from an advertising agency and I had been hoping to get some…